Ukuze umsebenzi ube yimpumelelo, kufuneka ulungiselele kwangaphambili. Ukujamelana nokukhathazeka kwengqondo, ukunyamezeleka kwengqondo kuya kunceda i-gymnastics yenkxaso yabasetyhini abakhulelweyo.
Uninzi lwabasetyhini luloyiko ngexesha lokuziswa, elibangela intlungu, ibopha iintlobo zomzimba wonke. Awukwazi ukuphazamisana nomzimba wakho, uthembela izilwanyana zakho kwaye uphumelele ngokupheleleyo ngamayeza ahlukeneyo. Imisipha engapheliyo emva, cinezela, iplasvic phantsi, ukuphefumula okungalunganga kubangela nzima. I-Gymnastics ngexesha lokukhulelwa lenza izakhono zesifuba ukuphefumula, uqeqeshe ukunyamezela, uqinisa imisipha efanelekileyo. Ukongezelela, iiklasi eziqhelekileyo kwiqela labamama abalindayo banciphisa iimbilini kwaye ngokuqinisekileyo zichaphazela isimo sengqondo.
Inendima ebalulekileyo ngexesha lokukhulelwa lithuba. Ukubamba umkhuhlane okhulayo, izihlunu zangemva kufuneka zizinze. Ungasebenzisa izivivinyo ukuqinisa imisipha yamanzi kunye nemilenze, ukuzisebenzisa ukuphuhlisa ukuguquguquka komgudu. Ezi zifundo zilula, zinokuqhutywa nanini na ixesha lokukhulelwa nangemva kokubeletha.
Kubafazi abachaphazelekayo kwizemidlalo ngexesha lokukhulelwa, kufuneka ukwazi ukuba unako kwaye awukwazi ukwenza. " Uninzi lwabasetyhini abakhulelweyo abazive kakuhle, ba tyelele ukudansa, ukubhukuda, ukushushuluza. Kuphela kufuneka ukuba uqaphele ngokukhwela kwiikhwila zokukhwela, ukukhwela i-skating, kunye nokuqeqeshwa kwamanqamli. Kulo lonke, umfazi ngokwakhe uzimisele isigqibo somngcipheko kuye. Ukuba ufuna ukukhwela umtya, kufuneka ukhethe intaba encinane. Masibe nexesha elivuyisayo kangangoko kunokwenzeka xa ulindele umntwana.
I-Gymnastics yabasetyhini abakhulelweyo bahlakulela amaqela akhethekileyo ezihlunu zezandla, imilenze, emva. Ukuzivocavoca kumaphephandaba kuyaphikisana, ukuxhatshazwa kwabo ngexesha lokulwa kuya kuphazamisa kuphela. Ngexesha le-gymnastics, kufuneka usebenze ngokuphefumula. Kwi-inhalation, imisipha iqiniswe, kwaye imisipha iphumle.
Khawucinge nje ngekati ekhuphayo, elula, evula umqolo. Isikhundla - simi kuzo zonke iine, sisekela kuzo zonke i "paws". Siphonsa imbuyiselo yethu ngangokunokwenzeka. Yenza intloko ijika. Emva koko siza kuguqa umva, njengokungathi ikati iyacaphuka. Sicinezela intloko kwi-chin. Phinda kathathu.
Sihlala eTurkish, sizalela ngamadolo. Ngokweqhinga, sibeka uxinzelelo emadolweni ngezandla zethu.
Ukuhlala okanye ukuma senza iikona zijika, izandla sisasaza kumaqela. I-pelvis ayihambeli.
Sidonsa kwiimisipha zosuku lweplavic, njengokungathi uzama ukuqhubeka uchama. Emva koko uvula iingcambu zesisu. Lo msebenzi usebenza ngokuthintela ukuthintela, ukwenzela ukuba akukho zikhefu.
Kubafazi abakhulelweyo, imilinganiselo ye-gymnastics ibalulekile, kodwa ukuyenza rhoqo kubalulekile ukuba ungadluli. Ngoku ubaluleke ngakumbi kunokuba uhlale uhlalisekile ngengqondo. Emva kwakho konke, usekupheleni kokufumanisa - kungekudala intombazana endiyintanda iya kuvela kwihlabathi.
Ukuphuhlisa abantwana, iiveki ezingama-36 zokukhulelwa
Imveliso yobuhle efanelekileyo yokukhulelwa
Indlela yokucima amazinyo akho
Iintombi kunye noomama abadala, ubudlelwane
Iiparameters zomthandi omhle
Umtshato emva kobudlelane besikhathi esifutshane-ngaba kuya kuzisa uvuyo?
Indlela yokuchitha ikhefu kunye neentsana